28 July – Maalinta Caalamiga ee Cagaarshowga. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / 28 July – Maalinta Caalamiga ee Cagaarshowga.
Muqdisho – Maalinta Caalamiga ee Cagaarshowga waxaa la xusaa 28 July sanad kasta si dunida loogu mideeyo kor u qaadista wacyiga la xiriira mushikiladda guud ee cudurka iyo in lagu dhiirr-geliyo is-baddal dhab ah. Waa maalin fursad looga dhigay biirinta dadaallada lagu dhaqan-geliyo mashruuca caafimaadka caalamiga ee WHO ku doonayso xakamaynta cudurkan marka la gaaro sanadka 2021 – iyo in sidoo kale laga caawiyo xubnaha ku jira QM inay ku guuleystaan hadafka ugu danbeeya oo ah – cirib-tir Cagaarshowga.
Qeybo kamid ah dadaallada loogu xiro cirib-tirka cudurkan waa in la dhiso hannaan siyaasadeysan oo lagu hir-geliyo ol’olaha looga soo horjeedo cudurka oo ay bilowday WHO sanadkii 2016.
In la tixraaco dadaallada lidka ku ah Cagaarshowga ee laga wado dalalka la dhiban, iyada la dhiirri-gelinayo falalka aan dowliga ahayn ee rayidka iyo kaalinta dowladaha.
Ku dhawaad 28 dal oo cudurkan ku badan yahay ayay ol’olaha WHO ee halhayska looga dhigay ‘Cirib-tir Cgaarshowga’ ka bixinaysaa warbixinno lagula tacaali karo.
Farriimaha wax-galka u ah Maalinta Caalamiga ee Cagaarshowga ayay tahay in loogu fiirsado si foojigan.
Dunida ahaan, tiro lagu qiyaasay 257 malyuun ayaa la noolaa nuuca ama caabuqa Cagaarshowga loo yaqaan hepatitis B (HBV) – 71 malyuun oo kalana waxay la noolaayeen hepatitis C (HCV) sanadkii 2015.
Bartilmaameedka caalamiga ee sanadka 2030 ayaa ah in 90% dadka la xanuunsan cudurkan ay helaan baaritaanno – iyo 80% bukaannada lala gaaro dawayn dhamaystiran.
Fayraska cudurkan wuxuu galabsaday nolosha 1.34 malyuun oo qof sanadkii 2015 – taas oo lala barbar-dhigi karo dadka u dhinta cudurka lagu naanayso jirada saboolka ee Qaaxada kana tiro badan kuwa u geeriyooda cudurka dilaaga ah ee HIV. Nasiib-darro dhimashada cudurkan way sii kordhaysaa. Nuucyada kale ee infection Cagaarshowga ka dhashay ah ayaa soo baxaya – ugu badnaan Hepatatis C sida ay tiri WHO. Ku guuleysiga hadafka cirib-tirka Cagaarshowga sanadka 2030 ma ahan mala’awaal iyo yididiilo. Warbixinnada laga helayo 28-ka dal ee ugu badan dhibanayaasha cudurkan ayaa muujinaya in saadaashu wacan tahay.
Previous: Maqal:- Casharka Tafsiirka Qur’aanka Idaacadda Himilo “Darsiga 45aad”
Next: Nin subax kasta webi kaga soo dabaasha aqalkiisa ilaa goobtiisa shaqada.